स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » जेरूसलेमबाट रियो दि जेनेरियो: अपमानजनक र सतही गहिराइको उत्सवबाट
जेरूसलेमबाट रियो दि जेनेरियो: अपमानजनक र सतही गहिराइको उत्सवबाट
यरूशलेममा पर्यटन र रियो दि जेनेरियोको पर्यटन समान र धेरै फरक छ। डा। पीटर टार्लो रियोबाट एक रातभरको उडान पछि रिपोर्ट गर्छन्। उनी राती :7:०० बजे रियो मैरियट होटलमा उठे र लेख्छन्।
धेरै मेरो आघात कोपाकाबाना बीच भरिएको थियो र यो अझै उज्यालो थियो। मेरो अर्ध-स्टुपरमा मैले बिर्सें कि म दक्षिणी गोलार्धमा छु र २१ डिसेम्बर यहाँ सालको सबैभन्दा लामो दिन र गर्मीको पहिलो दिन हो।
रियो दि जेनेरियोबाट यरूशलेम आएका सिधै आइपुग्दा मैले महसुस गरें कि म संसारको दुई भौगोलिक छेउमा मात्र नभई दुई सांस्कृतिक ध्रुवविरोधी पनि थिए। यदि यरूशलेम पवित्र विनम्रता भएको शहर हो भने रियो दि जेनेरियो ठीक यसको विपरित हो। यहाँ, सायद तापको कारण, लुकेका पारदर्शी हुन्छन्। समुद्री तटको माईलमा, क्यारियोकास, (रियोका मानिसहरूलाई दिइएको नाम) सम्भव भएसम्म कम से कम कपडा लगाउँदछ, जहाँ तपस्वीहरूले बढी व्यक्तिगत विवेकको माग पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी यदि यरूशलेम गहन उत्सव हो, रियो बेकार र सतही को एक उत्सव हो। स्थानीयहरूले भने कि रियोको संस्कृतिमा तीन खम्बा छन्: फुटेबोल (फुटबल), समुद्र तट, र कार्निवल। यहाँ काम क्यारियर होईन तर कामुक खोज र जीवनको दुर्घटनामा हस्तक्षेप हो।
असमानताहरूको बावजुद, कहिलेकाँही विरोधाभासहरू भेटिन्छन यरूशलेम एउटा गहिरो विश्वासको शहर हो, यति गहिरो कि कहिलेकाहिँ यी आत्मविश्वासहरूले आफूलाई हिंसामा प्रकट गर्दछ। रियो यहाँको शहर हो र अहिले यति धेरै, कि joie de vivre दृष्टिकोण पनि हिंसात्मक हुन्छ। एउटा शहरमा, हिंसा धेरै हेरचाहबाट उत्पन्न हुन्छ, र अर्कोमा यो एकदम थोरै मात्र देखिन्छ। विडम्बनाको कुरा, दुबै शहरको सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू विश्वासका साथ गर्नुपर्दछ। यदि यरूशलेमको डोम अफ द रक, पश्चिमी पर्खाल, र चर्च अफ द होली सेपुलचरले प्रभुत्व जमाउँछ भने रियोमा क्याथोलिकताको अन्तिम प्रतीक कोर्कोभाडोले प्रभुत्व जमाउँछ।
त्यसरी नै इजरायल मध्य पूर्वमा छ तर सांस्कृतिक हिसाबले यो वर्तमान मध्य पूर्वको होईन। हजारौं वर्षले यहूदी जीवनले अरब सभ्यताको भविष्यवाणी गरिरहेको तथ्यको बाबजुद पनि इजरायल सांस्कृतिक रूपमा मध्य पूर्वको परिधिमा अवस्थित छ। यो अरबीको समुद्रमा हिब्रू भाषी टापु हो। त्यस्तै ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकामा हो तर ल्याटिन अमेरिकाको होईन। यहाँ भाषा पोर्तुगाली र ब्राजिलियन संस्कृति हो र खाना यसको स्पेनी भाषा बोल्ने छिमेकीहरू भन्दा टाढाको संसार हुन्। जसरी इजरायल मध्यपूर्वको किनारमा अवस्थित छ, त्यसरी नै ब्राजिल पनि हो र वास्तविक अर्थमा वास्तविकता संयुक्त राज्यको पनि हो।
यसमा कुनै श is्का छैन कि ब्राजिल र रियो दुबै राजनीतिक परिवर्तनको समयमा गुज्रिरहेका छन्। विगतका समाजवादी वामपन्थी सरकारहरू बगेर गए। उदारवादको रूपमा भेषमा परेको समाजवादलाई कुनै समय गरीबहरूको आशाको रूपमा हेरिन्थ्यो तर अब यसलाई दलित वर्गको विषको रूपमा लिइन्छ। यहाँका मानिसहरु समाजवादलाई त्यस्तो तरिका भनेर बोल्छन् जसको माध्यमबाट धनी सेतो छद्म इन्टेल्युवाइजले गरिबहरुलाई गरिब र भोली युवाहरुलाई बस्न मनाउँदछ, गरिबी र निराशाको जीवनमा फसेका छन्।
यद्यपि यो राजनीतिक परिवर्तनले गरिबीलाई आर्थिक अवसरमा बदल्नेछ वा एक असफल राजनीतिक आकांक्षा मात्र हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी गर्न हिम्मत गर्नु एकदमै अग्रसर छ, त्यहाँ ठूलो आशा छ। त्यस अर्थमा त्यहाँ यी दुई धेरै भिन्न शहरहरूमा ठूलो समानता छ। इजरायलको राष्ट्रिय गान होटिक्वा हो जसको अर्थ होप र यहाँ रियो दि जेनेरियोमा प्रायः जसो शब्द सुन्ने शब्दहरू हुन्छन् एस्पेराना: होप!
सायद यो आशा छ कि यी दुई सांस्कृतिक ध्रुवीय विरोधीहरू एकजुट हुन्छ र मानव आत्मालाई अन्धकारबाट उज्यालो बनाउन अनुमति दिन्छ। उत्तम भूमि जहाँबाट सूर्य उज्ज्वल रूपमा आशा र सरल आनन्दको साथ चम्किन्छ।
Beach ब्राजिल होटल इस्राएलका यरूशलेम ल्याटिन ल्याटिन अमेरीका मध्य पूर्व पिटर टार्लो रियो दि जेनेरियो
कोर्टयार्ड बर्लिtonटन, ओन्टारियो: अभिनव डिजाइन र लचिलो ठाउँ
चong्गक्वि and र पेरिस गैर हेनान एयरलाइन्समा रोक्दैनन्
लन्डन अदालतले जुलियन असान्जलाई सुपुर्दगी गर्न आदेश...
चीनले पहिलो व्यावसायिक मानवरहित स्वायत्त...
म्याग्नुसन होटल्सले नयाँ सीओओको नाम राख्यो
डा. पिटर ई. टार्लो एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता र पर्यटन उद्योग, घटना र पर्यटन जोखिम व्यवस्थापन, र पर्यटन र आर्थिक विकास मा अपराध र आतंकवाद को प्रभाव मा विशेषज्ञ छन्। 1990 देखि, Tarlow ले पर्यटन समुदायलाई यात्रा सुरक्षा र सुरक्षा, आर्थिक विकास, रचनात्मक मार्केटिङ, र रचनात्मक विचार जस्ता मुद्दाहरूको साथ सहयोग गर्दै आएको छ।
पर्यटन सुरक्षा को क्षेत्र मा एक प्रसिद्ध लेखक को रूप मा, Tarlow पर्यटन सुरक्षा मा धेरै पुस्तकहरु को लागी एक योगदानकर्ता लेखक हो, र Futurist, यात्रा अनुसन्धान को जर्नल मा प्रकाशित लेख सहित सुरक्षा मामिलाहरु को बारे मा धेरै शैक्षिक र लागू अनुसन्धान लेख प्रकाशित गर्दछ। सुरक्षा व्यवस्थापन। टार्लोको व्यावसायिक र विद्वान लेखहरूको विस्तृत श्रृंखलामा "डार्क टुरिज्म", आतंकवादको सिद्धान्त, र पर्यटन, धर्म र आतंकवाद र क्रूज पर्यटन मार्फत आर्थिक विकास जस्ता विषयहरूमा लेखहरू समावेश छन्। टार्लोले यसको अंग्रेजी, स्पेनिश र पोर्तुगाली भाषा संस्करणहरूमा विश्वभरका हजारौं पर्यटन र यात्रा व्यवसायीहरूले पढेका लोकप्रिय अन-लाइन पर्यटन न्यूजलेटर टुरिजम टिडबिट्स पनि लेख्छन् र प्रकाशित गर्छन्।